Otu esi etinye MariaDB 10.5 na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye MariaDB 10.5 na Ubuntu 20.04
October 22, 2021 Nwere ike 23, 2021 by Jọshụa James
Wụnye MariaDB 10.5
Lelee ọnọdụ ọrụ MariaDB 10.5
Chekwaa MariaDB 10.5 na edemede nchekwa
Banye na MariaDB 10.5 Ihe atụ
Wepu (wepu) MariaDB 10.5
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye MariaDB 10.5 na Ubuntu 20.04 LTS.
Iji wụnye MariaDB nke ọma, ị ga-ebubata ihe igodo GPG iji nyochaa na ngwungwu ndị a sitere na isi mmalite ma emegharịghị ya.
Iji mee nke a, jiri iwu a:
Na-esote, gbaa iwu na ọdụ gị ka ịbubata ebe nchekwa MariaDB 10.5:
Ugbu a ebubatara igodo na ebe nchekwa, melite ndepụta njikwa ngwugwu dabara adaba iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ ahụ.
Pịnye Y ma pịa Tinye igodo ịga n'ihu na nwụnye.
ụdị Y, pịa pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mwepụ nke MariaDB 10.5. Mara, nke a ga-ewepụkwa akara niile na sistemụ gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ụdị MariaDB kachasị ọhụrụ na ntọhapụ kwụsiri ike ọhụrụ Ubuntu 20.04. N'ozuzu, ọ ga-enyere aka ma ọ bụrụ na ị kwalite si ochie anụ 10.2 / 10.3 / 10.4 dị ka ọ mara mma seasoned ugbu a tụnyere 10.5, na e nwere bukwanu uru na arụmọrụ na upgrading. Ọ bụrụ na ị na-eme nkwalite, jide n'aka na ị na-akwado nchekwa data gị mgbe niile tupu ime ya iji zere ọtụtụ awa mgbu na nkụda mmụọ.
Otu esi etinye NGINX Ultimate Bad Blocker na Ubuntu 20.04
2 echiche na "Otu esi etinye MariaDB 10.5 na Ubuntu 20.04"
December 1, 2021 na 4: 41 pm
na-arụ ọrụ nke ọma na ubuntu m 20.04. daalụ
December 1, 2021 na 4: 44 pm
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite n'ọdịnihu, enwere m 10.6 na 10.7 maka Ubuntu 20.04 mere mgbe ị dị njikere.